Abakhiqizi bezikhwama zokuhamba & abahlinzeki - Indawo ye-China Travel bag Factory
Umhlaba awuyena owokubona, kepha owokuhamba. Isikhwama sokuhamba esinemfashini nesimfashini senziwe ngendwangu ekhethiwe engenasici ephakeme engenawo amanzi, engahambisani, nobunzima obukhulu ,phefumula futhi ntofontofo. Idizayini enobukhulu obukhulu ingagcina inani elikhulu lezinto ezinjengokugqoka komuntu siqu, amakhompyutha, amaselula, izambulela, njll., Kanye nesikhwama se-zipper sangaphambili kungagcina izingcingo zamakhompiyutha, amakhompyutha we-tablet, amaketanga okhiye nezinye izinto ukuze zisetshenziswe kalula kunoma yikuphi isikhathi.
Isikhwama esikhulu sokuhamba sokuhamba esikhanyayo esikhulu esikhwameni senduku
Sikholelwa ukuthi abagibeli bangathatha izindiza eziningi ezahlukene ngesikhathi sokuphila kwabo. Ngakho-ke, siklame le phakethe elivunyelwe kakhulu lekhabethe, ngakho-ke lemukelwa yizindiza eziningi e-United Kingdom, e-United States naseYurophu.
Isikhwama semithwalo esijikeleze ibanga elilingana nebanga elincane esinebhande elinezikhwama ezizimele zezinyawo ezomile nezomile zokuhlukaniswa kwezimanzi
Engasindi futhi iyaphatheka: Isikhwama sokuhamba semidlalo senziwe ngendwangu esezingeni eliphezulu ye-oxford, izizwa ikhululekile, ingasindi, ayivimbi, ayisivikeli futhi ayihambisi manzi. Kuklanywe ngesikhwama esikhulu esinamthamo omkhulu, isikhwama sokwehlukanisa esomile nesomile nesikhwama sezicathulo esihlukile, esingagcina kalula isikhwama ngasinye. Izinto zokuhamba ezahlukahlukene.
Isikhwama semidlalo yokuqina yezemidlalo engangenisi isikhwama esincane sokuhamba esingenamanzi esikhulu
Kwakhelwe kahle isakhiwo sangaphakathi esikhulu esinamandla amakhulu, esingagcina futhi sithwale izingubo, amaselula, amakhompyutha, amashaja, njll., Sikhululekile ukusebenzisa futhi ukuphatha izinto kangcono. Ukusetshenziswa kwama-zippers asezingeni eliphakeme, ukwakhiwa kwe-zip ekhanda kabili, ukuvulwa okubushelelezi nokuvala, akulula ukugqwala. Ukuthwala imichilo entofontofo, elula futhi engokoqobo. Amandla aphezulu nokuxhuma okuqinile kwepulasitiki, okuhlala isikhathi eside.
Isikhwama sokuhamba sokuhamba esingenasici samanzi esilinganiselwe esinamadoda nabesifazane esikhwameni esikhulu esikhwameni esikhulu sasesithendeni
Isikhwama sokuhamba esihle, umthamo ophethe umthwalo wesikhwama sesandla ubalulekile. Ubude bokubopha kwesandla kwalesi sikhwama sokuhamba kufinyelela yonke indlela kuye ezansi kwesikhwama, kuguqula amandla adonsela phansi abe yingxenye yomzimba wesikhwama, ongaqinile futhi oqinile kuphela kepha futhi andisa umthamo wesikhwama sokuthwala.